" မကြာခင်ရန်ကုန်လေဆိပ်ကိုဆင်းသက်ပါတော့မယ်ရှင်.. ထိုင်ခုံခါးပတ်များပတ်ထားပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်"
စာရေးသူအိပ်ငိုက်နေရာမှ . . စပီကာမှလေယာဉ်မယ်၏အသံကြောင့်လန့်နိုးခဲ့တယ် . . နေပြည်တော်က ရန်ကုန်အပြန်ခရီးမှာတနေကုန်အစည်းအဝေးတွေကြောင့်ဗိုက်ကဆာ . . လေယာဉ်တက်စကလေယာဉ်မယ်လေးလာတိုက်သောအချိုရည်(၁)ခွက်သောက်ပြီးအဆာပြေမုန့်လာဝေတာစောင့်နေရင်းမှေးကနဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ယခုမကြာခင်လေယာဉ်ဆိုက်တော့မည်။ " အဆာပြေမုန့်လာဝေသေးလား"ဟုဘေးမှအတူပါလာသည့် မိတ်ဆွေကိုညီကိုမေးလိုက်တယ်။ခေါင်းခါပြသည်။နားမလည်၍လေယာဉ်မယ်ကိုမေးကြည့်တော့မှရှင်းတော့သည်။ " (၁)နာရီအောက်ပျံသန်းချိန်ရှိတဲ့ခရီးစဉ်တွေမှာအချိုရည်ကလွဲပြီးအဆာပြေအစားအစာမကျွေးတော့ပါဘူးရှင်" တဲ့ " x xx"
၀န်ကြီးနှင့်အစည်းအဝေးမပြီးသေး၍ MNA လေယာဉ်လွတ်သွား၍နောက်ဆုံးလေယာဉ်ရှိသေး၍ Go Shore လက်မှတ်တကြောင်းကိုကျပ်၈၆,၀၀၀ပေးစီးခဲ့ရသည်။အရည်သာတိုက်ပြီးအစာမကျွေးတော့ Low Cost Carrier (LCC) တော့မဟုတ်ပေ။ (၄၅)မိနစ်ခန့်ကြာသည့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှာ Duty Free ဈေးလိုက်ရောင်းနေသံတော့ကြားလိုက်ရသည်။ ကောင်းလေစွ . . .
စာရေးသူအနေဖြင့်လစဉ် Travelling ဂျာနယ်မှာခရီးသွားဆိုင်ရာ"အီဗော်လူးရှင်း" ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့သည်မှာယခုဆို (၄)ကြိမ်မြောက်ပြီ. . ဒီတခေါက်ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကိုတော့ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမည့် Topic ကိုသာဖော်ပြလို၍ လေကြောင်းအီဗော်လူးရှင်းကို Sub Title အနေဖြင့်သာအကျဉ်းဖော်ပြလိုက်ရလေသည်။ ရှေ့မီနောက်မီ ခရီးသွားဂုရုများသိနိုင်သော်လည်းရှေ့မမီနောက်မမီသူများအတွက်မြန်မာ့လေကြောင်းသမိုင်းမှယနေ့ထိအခြေအနေကိုအကျဉ်းချုပ်ရေးသားလိုက်ရပေသည်။
တချိန်ကအရှေ့တောင်အာရှမှာခေတ်အမှီဆုံးလေဆိပ်ဟာမင်္ဂလာဒုံ၊ရန်ကုန်မြို့တော်မှာရှိပြီးရှေးအကျဆုံးလေကြောင်းလိုင်းဟာ၁၉၄၈ကတည်းက UBA (Union of Burma Airways) ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတာ ဗိုင်းကောင့်မှသည်ဖော်ကာခေတ်ရောက်တော့ BAC (Burma Airways Corporation) ဖြစ်လာပြီး၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဘိုးရင်း B 727 လေယာဉ်ပိုင်ခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊စင်္ကာပူ၊ဘန်ကောက်တခွင်ဂျက်လေယာဉ်နဲ့အတောင်ပံဖြန့်နိုင်ခဲ့တာ "မြန်မာ" ပေတကား။
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ . . လေယာဉ်ပေါ်မှာငှက်ပျောသီးပဲကျွေးလို့ Burma Airways ကို Banana Airways လို့လှောင်ပြောင်ခေါ်ခဲ့တာမှတ်မိပါသေးတယ် . .
၁၉၉၀ပြည့်လွန်နှစ်န၀တစစ်အစိုးရခေတ်မှာ (၂၄)ပစ္စည်းတံဆိပ်ဝိုင်းသဏ္ဍာန် Myanmar Airways (MA) Logo ပြောင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှုန်းနည်းခဲ့တာအံ့သြစရာပေတကား -
UB လို့ ICAO အသိအမှတ်ပြု Airline Code ထင်ရှားခဲ့တဲ့ MA ဟာ၁၉၉၄မှာစင်္ကာပူဖက်စပ်အဖြစ် MAI နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်း Flag Carrier အဖြစ်ဘိုးရင်း 757 ကိုယ်ပွားမွေးခဲ့သည်။ အလားတူ ပြည်တွင်းလေကြောင်းနဲ့ မလေးရှားဖက်စပ် Air Mandalay (6T) ကိုလည်းဆက်လက်ကိုယ်ပွားမွေးခဲ့တယ်။ ATR 72 လေယာဉ်(၂)စင်းနဲ့Boutique Airline အနေနဲ့ဂုဏ်ယူစွာစီးရင်းရင်ခုန်ခဲ့ရတယ်။ YA လို့ပါးစပ်ဖျားမှာခေါ်လေ့ရှိတဲ့ Yangon Airways (YH) လည်း၁၉၉၆မှာ Visit Myanmar Year နဲ့အတူမွေးဖွားလာခဲ့တာ ယနေ့တိုင်အတောင်ပံဖြန့်နေဆဲ . . 'အာဂ' လေကြောင်းလိုင်းတခု ပင်တည်း။ မြန်မာ့လေကြောင်းသမိုင်းမှာUBပြီးရင်ဖော်ကာ (F100) ၂စီးအပါအ၀င် Fleet လေယာဉ်စီးရေအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Air Bagan (W9) ဟာလည်း၂၀၀၅ခုနှစ်လောက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး(၁၀)နှစ်သားလောက်မှာ AOG ( Aircraft on Ground) ဖြစ်ခဲ့တယ်။ W9 နဲ့အမျိုးတော်တဲ့Asian Wings လဲတောင်ပံမခတ်တချက်ခတ်တချက်ပါပဲ။၂၀၁၁လောက်မှာ K7 လို့နာမည်ကြီးတဲ့ Air KBZ (ကမ္ဘောဇ)ဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ကြီးထွားလာ ပါတယ်။သူလဲ Fleet အများဆုံး လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးMAIနဲ့ဝမ်းကွဲတော်ပါတယ်။၂၀၁၃လောက်မှာGolden Myanmar Airline (GMA, Y5) လည်း Air Bus ပျံခဲ့တဲ့လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ (စာကြွင်း-AirBaganလည်းပထမဆုံးပြည်တွင်းမှာAir Bus A310 ၀ယ်ခဲ့ပေမယ့်operation cost များပြားခြင်းစည့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် AOG (Aircraft on Ground) ဖြစ်၍ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ရပ်ထားရင်းဈေးအကြီးဆုံး Aero Billboard အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တယ်။)
၂၀၁၄လောက်မှာနေပြည်တော်အခြေပြုပြီးရန်ကုန်မှကော့သောင်းအထိအဓိကခရီးစဉ်ပြေးဆွဲတဲ့ Apex ဆိုတဲ့လေကြောင်း လိုင်းလည်း ATR လေယာဉ်တစ်စီးတည်းနဲ့ လေကြောင်းလောကထဲဝင်ခဲ့တယ်။ အလားတူ UB လေယာဉ်တွေကို Charter စင်းလုံးငှားဆွဲလေ့ရှိတဲ့ Sun Far ကုမဏီမှကိုယ်တိုင်အတောင်ပံဖြန့်မည့်မန်းရတနာပုံ (7Y) လေကြောင်းလိုင်းလည်းယနေ့တိုင်လေမှာပျံနေဆဲ . . K7 ကိုနေပြည်တော်စင်းလုံးငှားရင်းအကျိုးအမြတ်ရခဲ့တဲ့ FMI အုပ်စုကလည်းFMI Air အနေနဲ့၂၀၁၆လောက်မှစခဲ့ပြီး (၂)နှစ်လောက်အကြာမှာ AOG ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ ၁၉၅၀ပြည့်လွန်နှစ်ကတည်းက အရှေ့တောင်အာရှမှာ လေကြောင်းလောက ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ၂၀၁၀ပြည့်လွန်နှစ်မှာပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်း(၁၀)လိုင်းရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတခုအဖြစ်အမည်တွင်ခဲ့တယ်။ Fleet ကတော့ (၂)ဒါဇင်ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကိုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်သန်း(၃၀)ကျော်လာပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသည်ပေါင်းသန်း(၁၀၀)ကျော်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့နိုင်ငံမှာတောင်ပြည်တွင်းပြေးဆွဲတဲ့လေယာဉ်ကုမဏီ(၇)ခုထက်မပိုပေ။စုစုပေါင်း Fleet (၂၀၀)စင်းခန့်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိခရိုနီတဦးပိုင်တဲ့လေကြောင်းလိုင်းတခုမှာ ATR လေယာဉ် (၂)စင်းသာရှိပေမယ့်မြေပြင်/ဝေဟင်ဝန်ထမ်း (၄၀၀)ကျော်ခန့်ထားတာကိုဂုဏ်ယူနေပါတယ်။ Thai Air Asia ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမြေပြင်/ ဝေဟင်ဝန်ထမ်း (၅၀၀)ခန့်သာရှိပေမယ့် လေယာဉ်အစင်းပေါင်း(၁၀၀)ကျော်နဲ့ တောင်ပံ ဖြန့်လျှက်ရှိပါတယ်။ Efficiency Vs Capacity သဘောပါ -
ပထမအချက်ကတော့ - DCA မြန်မာရဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊စည်းမျဉ်းတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားမှုပါပဲ . .
DCA ညွှန်ချုပ် (အငြိမ်းစား)တဦးရဲ့ရင်ဖွင့်သံကတော့ဥပဒေအရလေကြောင်းလိုင်းတခုရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ AOC (Air Operations Certificate) ရဖို့အနည်းဆုံး Fleet လေယာဉ်(၅) စင်းရှိရမည်ဟုသိရပါတယ်။ (၃)နှစ်ဆက်တိုက်အရှုံးပြရင် AOC ပြန်သိမ်းခွင့်ရှိကြောင်း၊ သို့ပေမယ့်ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း ခရိုနီတွေပိုင်တဲ့လေယာဉ် ကုမ္ပဏီအချို့ကတော့ လေယာဉ်(၁)စင်း၊ (၂)စင်းနဲ့လည်း AOC လိုင်စင်ချပေးခဲ့ရကြောင်း၊ (၃)နှစ်မကရှုံးလည်း AOC ကိုမထိရဲကြောင်း၊ အပြိုင်အဆိုင် "သူဌေးဈေးရောင်း" နေတာပြည်မြန်မာဟုပင်ဆိုစမှတ်ပြုရပေတော့မည်။
၂၀၁၂နောက်ပိုင်းကစပြီးပြည်တွင်းလေယာဉ်ခတွေမှာစကားသစ်(၂)ခုရင်းနှီးခဲ့ရတယ်။ YR လို့ခေါ်တဲ့ Fuel Surcharge နဲ့ YQ လို့ခေါ်တဲ့ Insurance Surcharge တွေဖြစ်ပါတယ်။ အတိုတကြောင်း (ညောင် - မန်း (သို့) မန်း - ဟဲ) မှာတင်ပြည်တွင်း ခရီးသည်ရောင်းဈေး၅၀,၀၀၀ကျပ်ဆိုပါစို့။ US$ နဲ့တွက်ရင် US$ 35 ခန့်သာရှိသည်။ YR ဆီဈေး US$ 27 နဲ့YQ အာမခံကြေး $3ပေါင်းရင်US$ 30 ရှိနေပြီးအဆာပြေစားစရာခထည့်မတွက်နဲ့ဦး-လေယာဉ်ခ (Net Fare) US$5နဲ့ဘတ်စကားခတောင်မရှိပေ။ Local တွေအတွက်အရှုံးခံဆွဲပေးနေရတဲ့သူတို့ရဲ့စေတနာ. . ! ဒါ့ကြောင့်လဲ နိုင်ငံခြားသားဈေး ဟာ (၂)ဆနီးပါးယူမှ Overhead နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Financial Cost ကာမိရုံသာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒီကြားထဲ VVIP, FOC/ Agency Discount/ Tour Operator လောကမှာ FOC လို့တော့မသုံးကြပါ။ Complimentary လို့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တောင်းတဲ့သူတွေ၊ AD 75/ AD 100ဆိုပြီးအလကားပေးလိုက်ရတာတွေ၊အခေါက်တိုင်းဂျိမ်းစ်ဘွန်းလို့ခေါ်စမှတ်ပြုတဲ့ CSO (Cabin Security Officer) လုံခြုံရေးမှူး(၂)ဦး စရိတ်တွေပေါင်းလိုက်ရင် US$ သိန်း/ သန်းဂဏန်းအထိရှိကြောင်း Airline CEO တစ်ဦးရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကစကားကိုကြားယောင်နေမိပါတယ်။
စာရေးသူလည်း(၁၂.၆.၂၀၁၈)မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ MTC ခေါ်မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားကွန်ဖရင့်မှာ Cluster အလိုက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ Destination Competences ဖြစ်စေဖို့လေကြောင်းခရီးဈေးတွေလျှော့ကြဖို့ (၃)ကြိမ်ထက်မက Airline မှအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာတစ်မျိုး၊စင်ပေါ်မှာ တစ်ဖုံ၊စားသောက်ဆိုင် မှာ ထိုင်ဆွေးနွေးချက်တွေအရအဓ်ိကဈေးကြီးပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အချက်တွေကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
လေယာဉ်ခ၏၂၀% ခန့်သက်ရောက်မှုရှိသည်။အကြောင်းမှာ Jet A1 လေယာဉ်ဆီကို စင်္ကာပူမှတဆင့် ၀ယ်ယူတင်သွင်းရာ၌ လက်လီဈေးသာသာဖြစ်နေခြင်း၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကန့်သတ်ချက်များ ကြောင့်သီလ၀ါအထိ သင်္ဘောကြီးများဆိုက်ကပ်ပြီး ဆီလှောင်ကန်များမှ တဆင့် လေဆိပ်များသို့ဆီသယ်ယာဉ်များဖြင့်အလီလီပို့ရာတွင် Logistic Cost အဆမတန်မြင့်မားခြင်း၊ စက်သုံးဆီများအပေါ်ကောက်ခံသည့်အခွန်ငွေ (CT 5%) ရှိနေခြင်း၊ဒေါ်လာဈေးမတည်ငြိမ်၍ ဆီဈေးများမှာ အတက်နှုန်းသာ ရှိနေခြင်း များဖြစ်သည်။ထို့အပြင်လေယာဉ်ဆီတင်သွင်းဖြန့်ချီခွင့်ကိုဖက်စပ်ကုမဏီကြီး (၁)ခုတည်းကို သာလုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားသည်မှာလည်းအကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစံနစ်တွင်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
လေယာဉ်ဆိုသည်မှာ (၅)နာရီသာနားချိန်ရှိမှသတ်မှတ်ကာလအတွင်းအရင်းကြေနိုင်မည့် Risk များရှိသည်။ အရင်းအနှီးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာလေထဲတွင်တောင်ပံဖြန့်နိုင်မှတော်ကာကျမည်။ထို့အတွက် Ground Time (ခေတ္တရပ်နားချိန်) တိုင်းအချိန်မီအပိုပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရ သည်။ထိုပစ္စည်းများသည် ကြိုတင်မှာယူပြီးအဆင်သင့်ထားမှသာ အရေးပေါ်လိုအပ်ချိန်တွင် အချိန်မီအစားထိုးပြင်ဆင်နိုင်မည်။ဥပမာ- လေယာဉ်ဘီးပေါက်ပြီးပျက်စီးခဲ့လျှင်အချိန်မီလဲလှယ်ရန်အပိုမရှိခဲ့ပါက AOG နားပေလေရော့.. Flight Cancel ဖြစ်လျှင်ဝင်ငွေ ထိခိုက်မည်။ အလျှော်အစားတွေရှိစမြဲ။ ငှားရမ်းခ၊အတိုးစရိတ်များစွာကုန်ကျပေရော့. . ထို့အတွက် အပိုပစ္စည်းများကြိုမှာလျှင်လည်း သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် Red Tape System အရအခက်အခဲ ပေါင်းစုံနှင့်ကြန့်ကြာတတ်သည်။ မမျှော်မှန်းနိုင်သည့်ငွေကြေးများ လည်းဝဲလေ့ရှိသည်။အကောက်ခွန်ဌာနမှလည်း Duty အပြည့်ပေးရသည့်အပြင်အမြန်ကြေးတွေရှိစမြဲ၊ (တစ်ချိန်ကဖြစ်ပေလိမ့်မည်. .ယခုတော့ . . ? ) အချို့လေကြောင်းလိုင်းများသည် Sanction ကြောင့်မူရင်းကုမဏီမှတိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်းခွင့်မရှိသဖြင့်ကြားပွဲစားမှဈေးကြီးပေးဝယ်ယူရသည့်ဒုက္ခရှိသည်။သို့ဖြစ်၍ Spare Parts တင်သွင်းစရိတ်သည် လေယာဉ်ခဈေးကြီးရခြင်း၏၂၀%ရှိကြောင်း လေကြောင်းလောကသားများ၏ အသံကိုရှယ်လိုက်ရပေသည်။
(ဂ) မြေပြင်ဝန်ဆောင်စရိတ် (Ground Handling Cost)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လေဆိပ်ပေါင်း(၂၈)ခုခန့်အသုံးပြုနေသေးသည်။နိုင်ငံတကာလေဆိပ် (၃)ခုသာရှိသည်။ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် Ground Handling Services ကို MNA, MAI, YAG ကုမဏီ(၃)ခုမှလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည်။မန္တလေးတွင် M Jlux ဂျပန် ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ကိုင်ပြီးနေပြည်တော်တွင် Pioneer ကုမဏီ (Yangon Aerodrome Company ၏လက်ခွဲလုပ်ငန်းစု) မှဝန်ဆောင်မှုပေးလေ့ရှိသည်။ ကျန်လေဆိပ်များတွင် MNA သာမကပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများမှလည်း ကိုယ်တိုင် မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ယန္တရား၊ Equipment များ၊ ငှားရမ်း/ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။သို့ဖြစ်၍ Over Head Cost မှာလေယာဉ်အခေါက်ရေနှင့် အချိုးချကြည့်လျှင်မကိုက်နိုင်ပေ။သို့သော် . . . သိက္ခာကျမခံနိုင်သည့် ခရိုနီသူဌေးများ ဈေးရောင်းနေသဖြင့်မပြောသာပေ။
နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် MNA/MA/YAG တို့၏ Package Cost များသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၀%ခန့်ဈေးကြီး သည်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Financial Cost နှင့် Demand/Supply မညီမျှ၍ဈေးကြီးသည် ဟုလေဆိပ်၊လေကြောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်များက ညည်းကြသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိကအသုံးပြုနေသာ ATR လေယာဉ်များသည် DCA သတ်မှတ်ချက်အရပျံသန်းချိန်နာရီ ၃၅၀၀မှ ၄၀၀၀ပြည့်တိုင်း HSI (Hot Section Inspection)အား ပြည်ပနိုင်ငံတွင် သွားရောက်စစ်ဆေးရပါသည်။ US$ 300,000 ကျော်ခန့် ကုန်ကျပါ သည်။ ATR ကုမ္ပဏီ၏သတ်မှတ်ချက်မှာပျံသန်းနာရီ ၆၀၀၀-၇၀၀၀ရောက်မှသာ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး HSI လုပ်ရသဖြင့် လေကြောင်းကုမ္ပဏီများအတွက်နစ်နာပြီးလေယာဉ်ခဈေးကြီးရသည့် အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သဖြင့် DCA သတ်မှတ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။
ပြည်တွင်းခရိုနီများအနေဖြင့်မူလအစတွင်နည်းမျိုးစုံနှင့်ချမ်းသာခဲ့သည့်ငွေကြေးများနှင့်လေယာဉ်ဝယ်ဝယ်/ငှားငှားအကြောင်းမဟုတ်သော်လည်း Public Listed အများပိုင်ကုမ္ပဏီ အသွင်ဆောင်လာလျှင် Clean Revenue ဖြစ်ရန်လိုသည်။ Bank Loan ဆိုလျှင်၁၃%နှင့်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။သို့အတွက် World Bank/IFC စသည့်ဘဏ်ကြီးများ၏ထောက်ပံ့မှုမရှိလျှင် Financial Cost ဒဏ်မခံနိုင်၍ဒေ၀ါလီခံရမည့်ညွှန်းကိန်းပြပေတော့မည်။
JV အနေနဲ့ Open Sky ပေါ်လစီကျင့်သုံးခွင့်ပြုမည်ဆိုလျှင် . . . . .
အာဆီယံလေကြောင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေအရ Open Sky ပေါ်လစီကိုကမ္ဘောဒီးယားမှ၂၀၀၀ပြည့်လွန်နှစ်က စခဲ့သည်။အခက်အခဲကြားမှအောင်မြင်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေမည်။သို့သော်Local Airline တွေ၊ National Flag Carrier တွေမှေးမှိန်ခဲ့ရသည်။ Tourism အတွက်ကောင်းသည်။ခရီးသည်တွေဈေးသက်သာစွာစီးနိုင်သည်။တစ်ချိန်က Bangkok Airways (PG)ကနှစ်(၂၀)တိုင် Monopolize လုပ်ခဲ့ရာမှဟွန်ဆန်အစိုးရ၏ပြတ်သားစွာဆောင်ရွက်မှုကြောင့် Open Sky Policy အရယခုအခါဗီယက်နမ်ဖက်စပ်လေကြောင်းလိုင်း Angkor Air နေရာယူလာသည်။တရုတ်ဖက်စပ်/ စင်းလုံးငှားတွေဝင်လာသည်။မြန်မာပြည်တွင်လည်း ANA/Air Asia မှပြည်တွင်းပြေးဆွဲရေး ဆွေးနွေးဖူးသည်။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကာကွယ်လိုသည်ကများ၍ပျက်ခဲ့ရပြီးတိုးတက်မှုနှေးသည်မှာစီးပွားရေး၊တိုးတက်မှုမြန်သည်မှာကုန်ဈေးနှုန်းဟုဆိုစမှတ်ပြုရပေမည်။ယခု MIC ဥပဒေသစ်အရ JV ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုစဉ်းစားသင့်ပေသည်။
(က) ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေညီညွတ်စေရေး-နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသည့် BAR ဟုအမည်တွင်သော Bureau of Airline Business Association ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။
(ခ) Occupancy ပေါ်မူတည်ပြီး Sector အလိုက်Code Sharing Interline Agreement ကိုပထမအဆင့်ကျင့်သုံးပြီး Special Proposal Agreement (PSA) မှတဆင့် Multi Level Agreement (MPA) – Engagement များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။ Airline/JV ပြုလုပ်သည်အထိစဉ်းစားသင့်သည်။
(ဂ) Cambodia Airport ကဲ့သို့ Ground Handling Company JV ပြုလုပ်ပြီးရန်ကုန်၊မန္တလေးလေဆိပ်များတွင်ပထမအဆင့် Ground Handling လေယာဉ်တိုင်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးလျှင်ဈေးနှုန်းသက်သာစေနိုင်မည်။
(င) လေယာဉ်ဆီဈေးကြီးခြင်းမှာ Logistic Cost တခုတည်းသာမကစင်္ကာပူမှတဆင့်ဝယ်ယူခြင်းသည်လည်း.လက်လီဈေးဖြစ်သဖြင့်ဈေးကြီးခြင်းအချက်တခုဖြစ်နိုင်သည်။ တင်သွင်ဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုတည်းသာပေးထား ခြင်း ( monopolize System )သည် လည်း Issue တစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာသောတချိန်အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှစက်သုံးဆီများ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွင် တိုက်ရိုက်ဆိုက်ကပ်တင်သွင်း ပြီးပိုက်လိုင်းဖြင့်နိုင်ငံ တ၀ှမ်းဖြန့်ဖြူးမည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှိလာလျှင်စင်္ကာပူကိုစာရင်းထဲထည့်စရာမလိုတော့ပေ။
၁၉.၁၀.၂၀၁၈ ရက် နေပြည်တော်မှ အပြန် လေယာဉ်ပေါ်တွင် မုန့် ၁ခု ပြန်ကျွေးတာ တွေ့ရ ပါသည်။Custom duty အချို့ကို လည်း ဖြေ လျော့ကြောင်း သိရ ပါသည်။ဆေးမီးတို ကုစားမှုတော့ မဟုတ်တန် ရာ ..ရေ ရှည် တိုးတက်မှု အတွက် အပြု သဘော ဆောင် မည့် မူဝါဒ များ ချ မှတ်နိုင်မည်ဟု မျော်လင့်ရပါသည်။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြုံတွေ့နေရသောဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းများ၏ Root Cause များကိုရှာဖွေနိုင်လျှင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက်ဈေးကြီးသည်ဆိုသည့်စကားရပ် နိဂုံးချုပ်ပေတော့ မည်။ လေယာဉ်ခဈေးကြီးသည်မှာ လည်းအထက်ဖော်ပြပါ Issue များသည် စာရေးသူ၏ အာဘော်တခုတည်းမဟုတ်ပေ… ဆွေးနွေးပွဲအရပ်ရပ်မှ စုစည်းတင်ပြချက်များကိုအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် ပုဂ္ဂိလကလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့အစည်းများမှ အပြုသဘောဆောင်မည့် Action Plan များကိုယခုမှစ၍နိဒါန်ပျိုးလျှင် နောက်မကျသေးပါ။ တရွေ့ရွေ့ တိုးတတ်မှု (Evolution) မှ အရှိန်မြှင့်ရွေ့ လျားမှုကိုပြုနိုင်၍ (Revolution) အနေဖြင့် စုပေါင်းတွန်းလျှင် “တစ်နေ့တစ်လံပုဂံဘယ်မရွေ့ဘဲရှိပေလိမ့်မည်”
Posted by Alex Aung at 1:49 AM
Labels: Opinion, ခရီးသွား
ဒူးရင်းသီးသာခွေယိုင် - ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ - ရခိုင်...
`မှောင်တဲ့အချိန်မှာ မိုဘိုင်းကင်မရာ အသုံးပြုပုံ...
"ဆောင်းလေပြေကြား က ချင်းတောင်"
♡ ဘယ်အချိန် အလေးလျှော့ဖို့လိုမလဲ ❆
❄ ကံစမ်းမဲ ❄
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးက ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရေ...
လက်ပံပျားကြက်ကြော် - ချဉ်ပေါင်ဖြူ စပ်ချဉ် - ပုစွ...
သုည ပါရမီ (Zero Talent)
- စနစ်တကျ အဆာခံ အဆီချနည်း -
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းရောဂါ (BPH) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ(SMES)၏ လက်ရ...
`V.I.P တွေ ရှိသေးလား´
Talk & Learn About YOGA (Part 2)
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းရောဂါ (BPH) ကို အနေအထိုင်၊ အစားအေ...
Huawei Mate 20 Pro : Is This The Real Life? Is Thi...
iPad Pro (2018) အကြောင်း
မွန်အုန်းနို့ကြက်သားဟင်း - မာလာကြက်ခြေထောက်သုပ် - ...
`အွန်လိုင်း၊ အော့ဖ်လိုင်း စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး၊ ဝါဒဖြ...
Talk & Learn About YOGA (Part 1)
Xiaomi Mi 8 Lite Review: Beauty of Youth
"ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်သော အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို"
ပင်လယ်စာသောက်ဆမ်း - တာဘက်စ်ကိုးကြက်ကြော် - ဆီစာ သ...